मानिसलाई जस्तै रोबोटमाथि पनि कर !
केही समयअघि विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको रुपमा रहेका बिल गेट्सले मानिसको रोजगारी खाइरहेको रोबोटमाथि पनि मानिसलाई जस्तै कर लगाउनुपर्ने बताएका थिए । यसले मानिसहरुको रोजगारी सुरक्षित पनि हुने उनको विश्वास रहेको थियो । मानिसहरुले आफ्नो आम्दानीबापतको केही रकम आयकरको रुपमा तिर्नुपर्नेमा रोबोटले भने कुनै पनि कर नतिर्नु अन्याय हुने तर्क विल गेट्सको रहेको थियो ।
रोबोटको आगमनसँगै मानिसहरुको रोजगारी पनि समस्यामा पर्नसक्ने देखिन्छ । मानिसलाई विभिन्न किसिमको सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने र कहिले कुनै समस्या पनि आइपर्नसक्ने भएको कारणले मानिसहरुको सट्टामा रोबोटको प्रयोग बढी हुने खतरा अहिले देखिएको छ । पछिल्लो समय विकास हुँदै गरेको स्वचालित सवारीको कारण अमेरिकामा मात्र करिब ३५ लाख मानिसहरुको रोजगारी गुम्ने भएको छ । यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि यसै किसिमले मानिसहरुको रोजगारी खोसिँदै गएको खण्डमा आगामी दिनमा रोजगारीको हाहाकार हुने सम्भावना देखिएसँगै अहिले ल्याएको योजनाले रोबोटको प्रयोगलाई केही कम गरी मानिसको रोजगारी बचाउन सक्ने देखिन्छ ।
मानिसको रोजगारी जोगाउनको लागि रोबोटमा कर लगाउने निर्णयले भने रोबोटलाई पनि कर तिर्नुपर्ने र मानिसको भन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा भने मानिसहरुको रोजगारी बच्ने सम्भावना हुन्छ । कुनै विशेष किसिमको प्राविधिक कामबाहेक अन्य क्षेत्रमा मानिसको रोजगारी उपलब्ध भएको खण्डमा भने मानिसको रोजगारीका साथै समग्र करको नतिजालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । रोबोटको संख्यामा लगातार वृद्धि हुँदै जानु र मानिसको रोजगारीमा गिरावट आउनुले एकातर्फ मानिसहको आयकर गुम्ने खतरा हुन्छ भने बेरोजगारीको अर्को भयावह समस्या निम्तिने खतरा हुन्छ । यो समस्याबाट पार पाउनका लागि विश्वका सबै मुलुकहरुले बेलैमा उपयुक्त किसिमको नीति ल्याउनु जरुरी हुन्छ ।
रोबोटमाथि कर लगाउने नीति उपयुक्त रहेको हुँदाहुँदै पनि केही समस्याहरु पनि रहेका छन् । रोबोटलाई काममा लगाउँदा कुनै किसिमको सम्झौता गर्नुपर्दैन र यसलाई काम गरेबापत कुनै तलब पनि दिनुपर्दैन, यसको अर्थ रोबोटको कुनै आम्दानी हुँदैन । जब रोबोटको कुनै आम्दानी हुँदैन भने उसलाई कसरी कर लगाउन मिल्छ ? यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसका साथै अन्य केही समस्याहरु पनि रहेका छन् । जसमध्येको एक अर्को समस्या रोबोटको कुनै प्रमोसन हुँदैन र तलबमा पनि वृद्धि हुँदैन । मानिसको तलबमा समयसमयमा वृद्धि भइरहने र त्यसैअनुसारको आर्थिक कारोबार पनि भइरहने भएको कारण आर्थिक व्यवस्था सन्तुलनमा रहन सकेको हो तर रोबोटमा भने यो सम्भव हुँदैन जसले समग्र आर्थिक क्षेत्र नै निष्क्रिय बन्ने खतरा हुन्छ ।
यसका साथै रोबोटमाथि कर लगाउने निर्णय गरिएको खण्डमा यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मानिसहरुले रोबोट एक मेसिन हो, यसले गर्ने काम पनि अन्य मेसिनहरुले गर्ने काम जस्तै हो । यस्तोमा रोबोटलाई कर लगाउने निर्णय गरिनुले आगामी दिनमा अन्य मेसिनहरुमा पनि कर लगाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका मेसिनहरुले कुनै किसिमको कर तिरेका छैनन् र आगामी दिनमा लगाइने करले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । यो समस्याको पनि समाधान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
अन्त्यमा गेट्सले ल्याएको योजना रोबोटमा रहेका केही समस्याहरुको सामाधान गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा उपयुक्त देखिन्छ । रोबोट मानिसहरुको रोजगारी खाँदा मानिसहरुलाई भने बेरोजगारी भत्ता दिएर राख्नु उचित हुँदैन । त्यसैले मानिसको रोजगारीको सुनिश्चित गरी उचित नियमभित्र रहनेगरी रोबोटको प्रयोग गर्नाले आर्थिक विकासमा पनि सहयोग पुग्छ ।